Halista Caafimaad Ee Cabintaanada Soodhaha Iyo Cudurrada laga Qaado - Daryeel Magazine
Halista Caafimaad Ee Cabintaanada Soodhaha Iyo Cudurrada laga Qaado
Daraasad cusub oo dhowaan la soo saaray, ayaa daaha ka fayday halisaha caafimaad eek u duugan cabbista sharaabka soodhaha leh.
Cilmi-baadhistu waxay sheegtay in dadka cabba sharaabka soodhuhu ku badan yahay ay halis caafimaad ugu jiraan xannuunada maskaxda ku dhaca oo uu ugu horreeyo cudurka isku buuqu, halka sharaabka soodhuhu ku yar yahayna uu yareeyo degenaansho la’aanta maskaxda la soo darista.
Daraasaddan oo lagu soo bandhigay kulan magaalada San Diego ku yeesheen mac-hadka neerfisyada ka shaqeeya ee la yidhaa American Academy of Neurology, waxay digniin adag u dirtay dadka aadka u badsada cabbista sharaabka shoodaha badan leh.
Cilmi-baadhisyo daraasaddan ka horreeyey ayaa lagu helay in cabbitaanka sharaabka aadka u macaan iyo khudaarta isku jirta ay saamayn badan ku leeyihiin kor-u-kaca cudurrada maskaxda ku dhaca, balse cilmi-baadhistani waa tii ugu horreysay ee si miisaan leh toos u khusaysa arrintan, sababtoo ah waxay ku daba jirta baadhistan sannado badan.
Laga soo bilaabo sannadihii 1995-kii ilaa 1996 dadka cabba noocyada kala duwan ee sharaabka waqtigan dunida laga isticmaalo, shaaha, khudaarta iyo kafeegu waxa lagu qiyaasay in tiradoodu ahayd 263,925 qof, halka 10 sanno kadibna cilmi-badhistan lagu weydiiyey dadka ka qaybgalay nay la kulmeen cudurka isku buuqa iyo in kale, waxaanay sannadkii 2000 dad tiradoodu dhan tahay 11,311 qof caddaysteen inuu haleelay xannuunkaasi.
Khubarada cilmi-baadhistan sameeyey waxyaabaha ay ogaadeen waxa ka mid ah:
Dadka cabba wax ka badan shan daasadood amma koob oo sharaabka soodhaha leh ah 30% waxay maalintii la kulmaan cudurka isku buuqa, marka loo eego kuwa aan iyagu isticmaalin.
Dadka cabba khudaarta soodhaha eh maalintii afar koob waxay 38% la kulmaan cudurka isku buuqa, marka loo eego kuwa cabbitaanka macaan isticmaala.
Khatarta xannuunka isku buuqu waxay ku badan tahay dadka sharaabka soodhaha leh cuntada ku cuna, marka loo eego kuwa iyagu sharaabka caadiga cabba.
Dr. Honglei Chen oo ka tirsan khubarada cilmi-baadhistan diyaariyey, ayaa soo jeediyey in laga taxadiro badsashada sharaabka soodhuhu ku badan yahay si aan qofka caafimaadkiisa maskaxda waxyeello u soo gaadhin.
Cudurrada Cusub Ee Laga Qaado Taleefoonnada Casriga Ah Iyo Internet-ka Xanuunada Iyo Dhibaatooyinka Laga Qaado Hurdo Yaraanta Liin Dhanaanta Oo Dawo Ka Ah Buurnida Iyo Xanuunada Laga Qaado Cuntooyinka Laga Qaado Kansarka